Amadodana enduna akhala ngamaphoyisa | Isolezwe
Amadodana enduna akhala ngamaphoyisa
Isolezwe / 10 September 2012, 4:11pm /
AMADODANA enduna yaseMankwanyaneni, eShowe, akhala ngokuthi amaphoyisa acheme nezitha zomndeni wakubo ngokuthi kuboshwe uyise ngodlame olwaqubuka kule ndawo ngenyanga edlule okwafa kulo abantu abayisithupha.
UMnuz Zwelibanzi Mthethwa (57) uboshwe nendodana yakhe uSbongiseni Mthethwa kanti kulindeleke ukuthi bavele namuhla eNkantolo yeMantshi yaseShowe lapho kulindeleke ukuthi bafake isicelo sebheyili.
Amadodana amathathu ale nduna nebhungu lakwaLuthuli, elasinda lidutshulwa ngelanga lesigameko, bebefike emahhovisi eSolezwe ngeledlule bekhala ngesikhekhelembana esishaywa ngamaphoyisa ophenyweni lwawo ngokuthi kuboshwe abakwaMthethwa kuphela ekubeni kulolu dlame kwafa izinsizwa zakhona ezimbili.
UMnuz Khanyisani Mthethwa, oyindodana kaMthethwa, uthe sebephila ngokucasha ngoba bathola imininingwane yokuthi bafunwa ngamaphoyisa.
“Sizwa obukhulu ubuhlungu ngalesi simo esenzeka emndenini wasekhaya. Amaphoyisa awakabophi ngisho noyedwa kubantu ababedubula abafowethu abashona. Uma kuthiwa ubaba wayephethe isibhamu pho kwenzeka kanjani ukuthi adubule abafowethu ababili abashona esibhicongweni,” kusho uKhanyisani.
Uthe abaphathi bamaphoyisa esifundazweni kufanele baqoke ithimba lamaphoyisa eliseceleni elingelona elakulesiya siteshi ngoba kukhona abazwelana nabantu ababesekhaleni le mpi yezigodi.
UKhanyisani uthe kunzima ukuthi yena nabafowabo balibangise kwelakubo eNgundwini ngoba abaphephile uma beya kuleya ndawo kwazise kunabantu ababaziyo abayingozi abangakaboshwa ababekhona ngesikhathi sesigameko abakholwa wukuthi ngeke bananaze ukubenza Isilo sengubo.